भान्साको काममा बच्चालाई खटाउदा हुने फाइदाहरु - ज्ञानविज्ञान
आमाबुबाले आफ्नो बच्चालाई पढाईमा मात्रै केन्दि्रत गर्नुहुन्न उनीहरुलाई जीवन उपयोगी सीपहरु पनि सिकाउनु पर्छ । अहिले हामी बच्चालाई स्मार्ट वा वौद्धिक बनाउने चक्करमा किताबमा मात्र घोकाउँछौं । विद्यालय भन्दा बाहिरको संसार देखाउँदैनौं । जबकी हरेक आमाबुबाले आफ्नो बच्चाको उज्जवल भविष्य चाहन्छन् । आफ्नो बच्चा हरेक कुरामा अब्बल आउन भन्ने चाहना सबै आमाबुबाको हुन्छ । हुन पनि बदलिँदो समयसँगै बच्चाहरु बहुप्रतिभाशाली हुनुपर्ने आवश्यकता हुँदै गएको छ । आफ्नो बच्चा हरेक कुरामा फिट होउन् भनेर आमाबुबाले त्यसै अनुसार उनीहरुलाई तयार गर्नुपर्छ ।
धेरैजसो आमाबुबाको एउटै गुनासो हुन्छ कि उनीहरुको बच्चा सबै खालको सागसब्जी वा खाना खाँदैनन् । यो यसकारणले पनि हुन सक्छ कि खानपानको धेरै जसो चीजहरु या त बच्चाले कहिलेकाँही देख्छन वा पहिलोपटक देख्दैछन् । त्यस्तै केही सागसब्जी उनीहरुलाई मन पर्दैन तर तपाईंले उनीहरुलाई गाली गर्नको सट्टा माया गरेर खान लगाउनुपर्छ । त्यस्तै तपाईंले दैनिक खाना बनाउँदा बच्चाहरुसँग खानपिनको चीजहरुको बारेमा कुरा गर्नुभएमा उनीहरु ती चीजलाई चाख्न चाहन्छन् ।
बच्चासँग घुलमिल हुन र उनीहरुको सोखको बारेमा जान्नको लागि किचनभन्दा राम्रो अर्को ठाँउ हुँदैन । बच्चा चञ्चल हुन्छन् त्यसैले अरुबेलामा उनीहरुलाई अगाडि राखेर आफ्नो कुरा भन्न र सुनाउन थोरै मुस्किल हुन्छ । यस्तोमा किचनमा हुने फरकफरक कुकिङ एक्टिभिटीहरुले उनीहरुलाई तपाईं तर्फ आकषिर्त गर्छ र उनीहरु केही समय त्यहाँ बिताउन चाहन्छन् । त्यसैले उनीहरुसँग कुराकानी गर्दै घुलमिल हुने उपयुक्त समय यहि हो ।
करियर बनाउनको लागि धेरैजसो बच्चालाई किशोरावस्था मै घरबाहिर होस्टल वा छुट्टै कोठामा रहेर पढ्नुपर्छ । यस्तो स्थितीमा तपाईंले सिकाउनुभएको खाना बनाउने सीप बच्चालाई सबैभन्दा धेरै काम आउँछ । उनीहरु मनपर्ने खाना वा स्वस्थ खानाको लागि कसैमा निर्भर नभई आँफै खाना बनाउनको लागि तयार हुन्छन् । बच्चाको उमेरअनुसार उनीहरुलाई सजिला परिकारहरु पनि बनाउन सिकाउनुहोस् ताकी उनीहरु पनि स्वस्थ खाना सुखी जीवनशैलीको सही अर्थ बुझ्न सकोस् ।
रेसादार खानेकुरा र बच्चाको स्वास्थ्य
Don't Miss it के कति खाने ? कस्तो र कति कसरत गर्ने मधुमेहका बिरामीले ? बुझिराखे धेरैको जोगिन्छ ज्यान
Up Next यी लक्षणहरु हुन् मुटुरोगका जसको घरेलु उपचारले ह्रदयघात हुन रोक्छ
सावधान ! हेडफोन प्रयोग गर्नुहुन्छ भने तपार्इले यस्ता समस्या झेल्नु पर्छ
यदि तपाईले खाली समयमा कानमा हेडफोन लगाएर घण्टौंसम्म गीतहरु सुन्नुहुन्छ भने सतर्क रहनुहोस् । घण्टौंसम्म कानमा हेडफोन लगाएर गीत सुन्दा…